Ithegi: i-imeyile infographic | Martech Zone
Maka: imeyile infographic
Izinto ezili-12 ezichaphazela isicwangciso sakho se-imeyile samanye amazwe
NgoLwesibini, Aprili 12, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Sibancedile abathengi nge-internationalisation (I18N) kwaye, ukubeka ngokulula, akumnandi. Imiba eyahlukeneyo yokufaka iikhowudi, ukuguqulela kunye nokubekwa eluntwini kuyenza yinkqubo entsonkothileyo. Ukuba yenziwe gwenxa, inokuba neentloni ngendlela emangalisayo ... ungasathethi ke ngokungenampumelelo. Kodwa i-70% yabasebenzisi be-intanethi abali-2.3 yezigidi kwi-Intanethi abazizithethi zesiNgesi zemveli kwaye yonke i-1 yedola echithwe kulwakhiwo ifunyenwe ine-ROI ye- $ 25, ke inkuthazo ikhona ukuba ishishini lakho lihambe
Uyakha njani iphulo lokuzibandakanya kwakhona kwabaBhalisi abangasebenziyo
Lwesine, ngoFebruwari 11, 2016 Douglas Karr
Kutshanje sabelane nge-infographic ngendlela yokuguqula umlinganiso we-imeyile yokuzibandakanya, kunye nezifundo ezithile zamanani kunye neenkcukacha-manani ezinokwenziwa ngazo. Le infographic evela kwiiMonks ze-imeyile, ii-imeyile zokuBandakanyeka kwakhona, ziyithatha zaya kwinqanaba leenkcukacha ukubonelela ngesicwangciso sephulo lokuguqula ukubola kokusebenza kwe-imeyile. Uluhlu oluqhelekileyo lwe-imeyile lubola nge-25% minyaka le. Kwaye, Ngokwengxelo ye-2013 yeNtengiso yeSherpa, iipesenti ezingama-75 zababhalisi be-imeyile
Zeziphi izinto ekufuneka uzivavanye kwiPhulo lakho le-imeyile?
NgoLwesihlanu, Septemba 25, 2015 NgoLwesihlanu, Septemba 25, 2015 Douglas Karr
Sisebenzisa indawo yethu yokungeniswa kwi-inbox ukusuka kwi-250ok, siye senza uvavanyo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo apho saphinda saphinda saphinda sazibuyisela kwimigca yethu yeendaba. Iziphumo zazingakholeleki-ukubekwa kwethu kwibhokisi engenayo inyuke ngaphezulu kwama-20% kuluhlu lwembewu esilwenzileyo. Inyani yile yokuba kuvavanyo lwe-imeyile kufanelekile ukuba utyalomali- njengoko kunjalo nezixhobo zokukunceda ufike apho. Khawufane ucinge ukuba yilebhu ephetheyo kwaye ucwangcise ukuvavanya okuninzi
Unokukhetha njani uMboneleli weNkonzo ye-imeyile
NgoLwesine, Septemba 10, 2015 Douglas Karr
Kule veki ndadibana nenkampani eyayicinga ngokushiya umboneleli wesevisi ye-imeyile kunye nokwakha inkqubo ye-imeyile ngaphakathi. Ukuba ubundibuze kwiminyaka elishumi eyadlulayo ukuba ibingumbono olungileyo lowo, ngendingazange nditsho. Nangona kunjalo, amaxesha atshintshile, kwaye itekhnoloji ye-ESPs ilula kakhulu ukuyiphumeza ukuba uyazi into oyenzayo. Kungenxa yoko le nto siphuhlise i-CircuPress. Yintoni etshintshe nabaNikezeli ngeenkonzo ze-imeyile? Olona tshintsho lukhulu kunye